Fanafihana nisesy teto Antananarivo : ravan’ny polisy ireo andian-jiolahy | NewsMada
Fanafihana nisesy teto Antananarivo : ravan’ny polisy ireo andian-jiolahy
Par Taratra sur 11/09/2017
Mba vaovao tsara… Nanao tohivakana ny vokatra azon’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) sy ny kaomisarian’ny boriborintany fahefatra sy fahadimy, ny herinandro teo. Rava tao anatin’izany ny tambajotran-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana, teny Andavamamba sy Sabotsy Namehana…
Nisy ny fisamborana andian-jiolahy mpanao fanafihana nataon’ireo polisy misahana ny fikarohana heloka bevava any Andavamamba sy Sabotsy Namehana tao anatin’ny telo andro lasa izay. Jiolahy miisa dimy indray saron’ny polisy nandritra ity hetsika manokana nataon’ny polisy ity. Isan’ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana nisesisesy teto an-dRenivohitra ry zalahy ireto, araka ny fanazavan’ny polisy. Mampiasa basy mahery vaika ry zalahy, saingy mbola eo am-pikarohana izany miaraka amin’ireo jiolahy namany ny polisy. Manao andiany hatrany izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny.
Fa ny zoma hariva teo tao anatin’ny fanaovana hetsika manokana, nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny BC, sakelika fahefatra fa misy olona mampiahiahy mitazona fitaovam-piadiana eny Ankadivato. Nidina teny an-toerana ny polisy ka tratra ireo olona roa niaraka tamin’ny basy Beretta 7,65 mm miaraka amin’ny bala dimy sy poleta iray hafa. Nilaza ry zalahy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa teo am-pitadiavana olona hividy ireo basy ireo ry zalahy kanjo izao voasambotra tampoka izao. Nanondro jiolahy iray mpiray tsikombakomba amin’izy ireo amin’ny famarotana ireto basy ireto izy roa lahy nandritra ny famotorana. Nosamborina teny 67 ha ny jiolahy iray efa nigadra teny Tsiafahy noho ny fanafihana mitam-piadiana sy fakana an-keriny. Fikambanan-jiolahy sy fikasana hivarotra basy ny hanenjehana azy ireo.
Fasan’ny Karana : Lehilahy nahatrarana basy sy 20 tapitrisa Ar
Tratran’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahadimy Mahamasina teny fasan’ny Karana ny zoma teo koa ny lehilahy iray milaza fa mpanangom-bokatra. Nampiahiahy ny polisy ny fihetsiny somary taitaitra. Nosaivana ny entany ka tratra tany aminy ny basy vita gasy iray miaraka amin’ny balana calibre 12 miisa sivy. Nahitana vola 20 tapitrisa Ar koa niaraka tamin’ilay basy. Tsy fantatra mazava ny momba ilay basy tany aminy. Nilaza izy fa hoe novidiny tany Morondava ilay basy, araka ny fanazavan’ny polisy. Momba ireo vola tratra tany aminy, tsy fantatra mazava ny fiaviany fa nilaza izy fa mpanangom-bokatra ka ampiasainy amin’izany ireo vola ireo.
Tetezan-dRamala : Jiolahy nahatrarana akanjona miaramila
Jiolahy dimy koa no tratran’ny polisy teny amin’ny tetezan-dRamala, ny zoma tamin’ny 11 ora antoandro. Mpanendaka anaty fiara eny 67 ha, faritra Cenam, ry zalahy ireto, raha ny tatitra avy amin’ny polisy. Nahitana akanjona miaramila tao anatin’ny sakaosin’ny iray amin’ireo jiolahy ireo, niaraka amin’ny balana Kalachnikov miisa 11. Avy any Ankazobe ity jiolahy iray ity. Nandritra ny fanadihadian’ny polisy no nahafantarana fa tsy miaramila intsony izy ka izao nivadika nanao asan-jiolahy izao.